कलाकारहरुले यस बर्ष दसैँ कसरी मनाउँदैछन् ? – Janamukhi.com
कलाकारहरुले यस बर्ष दसैँ कसरी मनाउँदैछन् ?
असोज १८, वर्षभरी एक्सन कटमा रमाउने कलाकार हुन् वा संगीतिक कार्यक्रमकले व्यस्त गायक गायिका । दसैँको रौनकले सबैलाई छोइसकेको छ । दसैँको किनमेलदेखि गाउँको यात्रासम्मको हतारो सबैमा देख्न सकिन्छ । यो दसैँ कोही आफ्नो पुरानो घरमा पुग्दैछन् । केही फूर्सद निकालेर आफन्तसँग मनाउने तरखरमा छन् । कसैकसैको कसरत दसैँमा घुमघाम गर्नेछ । कतिपयले त दसैँंको लागि विशेष योजना समेत बनाएका छन् । कोहीका भने हल्काफुल्कामै दसैँ बिदा गर्ने मूड छ । कलाकारको यो वर्षको दसैँं योजना उनीहरुकै शब्दमाः
विपिन कार्की (अभिनेता)
मेरो सबै परिवार अहिले काठमाडौंमै छन् । दसैँ यतै मनाउँछु । २४–२५ गतेबाट फेरि सुटिङमा जानु पर्ने भएकोले कतै जाने कार्यक्रम छैन । दसैँका लागि भनेर त्यसतो केही किनेको पनि छैन । किन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । सानोमा हो भने नयाँ लुगा लगाउनु नै पथ्र्यो । यो पठकको दसैँ रमाइलो हुने अपेक्षा गरेको छु ।
रजनी केसी (अभिनेत्री)
दसैँ एकदमै मनपर्ने पर्व हो । आफूभन्दा ठूलासँग आशीर्वाद लिने र सानालाई दिने यो पर्वको महत्व ठूलो छ । माता दुर्गाको उपासना गर्ने यो पर्व घरमै मनाउँछु । सानोमा नयाँ लुगा, जुत्ता र दक्षिणा आउँछ भनेर खुसी लाग्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था रहेन । अहिले मान्यजनबाट आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । आफ्ना लागि केही किनेकी छैन । आमाका लागि स्पेसल गिफ्ट दिने विचार छ ।
प्रदीप खड्का (अभिनेता)
यो पटक जुठो भएकोले मेरो दसैैँ छैन । त्यसैले दसैँभरी घुमेर बिताउने योजना छ । अहिले चितवन आएको छु । अब पोखरा, विराटनगर लगायतका स्थान घुम्न जान्छु ।
साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह (अभिनेत्री)
दसैँका लागि केही कपडा किनेकी छु । पहिले पहिले सधै मामुले रोजाएर किनिदिनु हुन्थ्यो । यो पटक आफैले किनेकी छु । दसैँ काठमाडौमै सुरु भएको छ । विराटनगर पनि जान्छु । आफन्तको हातबाट टीका लगाएर आशीर्वाद लिन मनपर्छ । आफूभन्दा ठूला सबैसँग टीका थाप्छु ।
कुमार कट्टेल ‘जिग्री’ (कलाकार)
यो वर्षको दसैँ काठमाडौम सबै परिवार एकठाउँमा भेला भएर मनाउने तयारीमा छौँ । आफूभन्दा ठूलासँग टीका र आशीर्वाद थापेपछि घुम्न जाने योजना छ । अन्य समय कामको प्रेसरले घुम्न, रमाइलो गर्न पाइएको छैन ।
दसैँको समय सदुपयोग गर्ने योजना छ । पछिल्लो समय रमाइलो भेटघाट भन्दा पनि दसैँमा खानपिन र जमघटतिर मानिसको जोड रहने गर्दछ । हामीले अहिले जसरी दसैँ मनाउछौ भोलिका पुस्ताले त्यो सिक्ने हुन् । त्यसैले हामीले राम्रोसँग दसैँ मनाउछु पर्छ ।
दीपिका प्रसाई (अभिनेत्री)
यो मेरो मनपर्ने चाड हो । यो पटको दसैँ मेरो घर सिन्धुरी र माइती धादिङमा मनाउँछु । त्यस्तो केही किनमेल छैन । एक जोर नयाँ कपडा किन्छु । आफन्त सबैकोमा गएर टीका लगाउँछु र आशीर्वाद थाप्छु ।
सन्तोष सेन (निर्माता)
यो पटक दसैँको थोरै समय भएपनि म पोखरामा मनाउँछु । पोखरामा मेरा सबै आफन्त र परिवारको पनि जमघट हुने गर्दछ । जन्मथलो स्याङ्जा गएर आफन्त साथीभाइ सबै भेट्ने योजना पनि छ । फिल्म ‘प्रेम गीत ३’को सेट बनाउनेदेखि अन्य धेरै काम भइरहेकोले दसैँ छिटो मिठो मनाएर काममा फर्किने योजना छ । दसैँको लागि मेरो विशेष किनमेल हुँदैन । दसैँको राम्रो पक्ष आफूभन्दा ठूलासँग टीका थापेर आशीर्वादपनि लिन पाइन्छ । सबैको भेटघाट हुन्छ ।
भावाना गुरुङ (अभिनेत्री)
दसैँ सबैभन्दा मनपर्ने चाड हो । परिवारसँग बसेर मिठो खाँदै, तास खेल्ने योजना छ । नयाँ पहिरन किन्न बाँकी छ । पिङ खेल्छु र आफूभन्दा ठूलासँग आशीर्वाद थाप्छु ।
सिताराम पोखरेल (गायक)
सबैभन्दा मनपर्ने चाडमा दसैँ पनि एक हो । म सधैको दसैँ विराटनगरमानै मनाउँछु । यो पटक पनि विराटनगर आएकी छु । विराटनगरको कालिका मन्दिरमा दर्शन गर्छु । काठमाडौ बस्ने भएकाले साथीभाइसँग नभेटेको धेरै भयो । उनीहरुसँग पनि भेट्छु । विराटनगरमा सबै परिवारका सदस्य जम्मा हुने भएकोले धेरै रमाइलो हुन्छ ।
नवल नेपाल (चलचित्र निर्देशक)
दसैँका लागि सामान्य किनमेल गर्छु । बलीप्रथाको संस्कार हटिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । आफूभन्दा सानालाई दसैँ आएको अनुभूति गराउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । शक्तिको प्रतिक नवदुर्गाको पूजा गरेर बुबाआमाको हातबाट आशीर्वाद थापेर, आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिँदै आफन्तसँग मिठो खाएर मनाउँदा रमाइलो हुन्छ ।
साहिमा श्रेष्ठ (गायिका)
यो पटक दसैँ घरमै मनाउँछु । कार्यक्रमबाट फुर्सद लिएकी छु । विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा सपिङ जहिले पनि हुने गर्दछ । त्यसैले दसैँमा किन्नैपर्छ भन्ने छैन । आफूभन्दा ठूलोसँग टीका थापेर आशीर्वाद लिन मनपर्छ । यो आफन्तसँग भेटघाट हुने पर्व पनि हो ।
खुश्बु खड्का (अभिनेत्री)
परम्परादेखि चल्दै आएको दसैँं एकदमै रमाइलो लाग्छ । दसैँका लागि जन्मस्थान सिन्धुपाल्चोक जाँदैछु । घरको लागि र पुजाको सामान र पहिरन किनेकी छु । टाढा भएको आफन्तको भेटघाट हुने, मिठो खाने र रमाइलो गर्ने चाडको रुपमा यो पर्व विशेष लाग्छ ।
दीपेन्द्र के खनाल (निर्देशक)
दसैँ यो पटक पनि सधैझै रमालो गर्ने विचार छ । अरु समय फिल्मको कामले भ्याइनभ्याइ भएर कोही भेट्न पाइँदैन । दसैँमा फुर्सद हुने भएकोले सबैसँग भेट हुन्छ । टीका थापेर आशीर्वाद लिन, दिन पाइन्छ । यो पटकको दसैँमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुस्ताङ जाने योजना छ । मुस्ताङ चिसो ठाउँ भएकोले त्यहाँका लागि केही कपडा किनेको छु ।
राज घिमिरे (अभिनेता)
दसैँ ललितपुरको गोदावरीमा मनाउँछु । आफ्नो लागि भनेर केही किनेको छैन । तर आफ्नो र म भन्ने साथीभाइका लागि सकेको सपिङ गर्दिएको छु । सबैसँग भेट हुन्छ । टीका थापेर आशीर्वाद लिन पाइन्छ । यसको रमाइलो पक्ष यही हो ।
टीका प्रसाई (गायिका)
हामी नेपालीको महान पर्व हो दसैँ । सत्यको जित भएको उत्सवको रुपमा लिइने यो दसैँ आफन्तसँग भेटघाट हुने, टीका थापेर आशीर्वाद लिने दिने परम्परा विशेष लाग्छ । वर्षभरिका थकान र तनाव सबै आफन्तसँग दसैँ मनाउँदा मेटिन्छ । दसैँका लागि परिवार र आफन्तलाई कपडा किनेकी छु । सधैझै यो वर्षपनि मेरो दसैँ रमाइलो हुनेछ ।
राज क्षितिज (अभिनेता)
टाढाटाढा रहेका आफन्त भेट हुने र ठूलासँग आशीर्वाद लिन पाइने भएकोले दसैँ विशेष लाग्छ । यो दसैँ रौतहटमा मनाउँछु । दसैँको दिन त्यहाँ एक सांगीतिक कार्यक्रम पनि छ । करिव ५० हजार जतिको किनमेल आफन्तका लागि गरेको छु । धेरै समयसम्म भेट नभएका आफन्तसँग भेट गराउने दसैँको मनपर्ने पक्ष हो ।
लक्ष्मी आचार्य (गायिका)
गतवर्ष हजुरआमा बित्नु भएकाले दसैँ मनाउन पाइएन । यो वर्ष भव्य रुपमा मनाउने विचार छ । गाउँ गएर मनाउँछु । पूजाको लागि, आफ्ना र घरका लागि केही सामान्य किनमेल गरेकी छु । दसैँ नेपालीहरुको ठूलो चाड भएकोले यो हर्सोल्लाससँग मनाउनु पर्छ ।
गजित बिष्ट (नायक)
आफन्तसँग भेट्ने, रमाइलो गर्ने र मन परेको परिकार बनाएर खाने पर्वको रुपमा लिइन्छ दसैँलाई । मन पर्ने पोसाक किनिसकेँ । यो हाम्रो महान चाड भएकाले हामीले यसको विषयमा गर्ने क्रियाकलापले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
भोलि यसरी भित्र्याइँदै छ फूलपाती
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागतमा तीव्र तयारी
माया र पिरतिका धेरै प्रश्नहरुको उत्तर भेटिने किताब, प्रचण्ड-सीताको जोडी
गायक भानुभक्त जोशी विवादमा,परस्त्रीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेकाे अडियाे भाइरल(सक्दो…
पक्राउ परे बलिउड अभिनेता शाहरुख खान …